Kabajaan Jaallan Qabsoo Nudura Eggalaniif Haata’u. FDG Umurii Waggaa 1 Jechuun Seenaa Jaallan Baroota Dheeraaf Wareegamanii Haaluun Seenaa Saba Ofii Wallaaluu Irraa Eegala. | QEERROO
Posted on November 3, 2016 by Qeerroo
November 3, 2016 in Fincila Diddaa Gabrummaa Oromoo, Fincila Xumura Gabrummaa (FXG) Oromoo
Ganna 11 dura (Sadaasa 09, 2005) hoogganummaa Adda Bilisummaa Oromoo fi hirmaannaa Saba Oromoo (keessattuu dargaggoota Oromoo)tiin Fincilli Diddaa Gabrummaa (FDG) dhowee guutuu Oromiyaa waliin gahuudhaan sirna bittaa alagaa hundee irraa raasuu jalqabe itti fufiinsa hojii kanaa ture. Warraaqsi Bilisummaa Oromoo yeroo sana maqaa Finicla Diddaa Gabrummaa jedhuun dhowe hirmaannaa Sabni Oromoo Qabsoo Bilisummaa isaa keessatti qabu boqonnaa haaraatti kan ceesisee fi duubbeen QBO Ummatichuma Abbaa Qabsichaa sana tahuu kan mirkaneesse ture. Osoo Wayyaaneen ABO fi WBO bosona Oromiyaa fi biyyoota ollaa keessatti adamsituu magaalaalee fi baadiyyaalee Oromiyaa guutuu keessatti dargaggootni Oromoo ABOdhaan gurmaawanii Alaabaa Dhaabichaa mirmirsaa WBO fi ABO faarfachaa gaaffii Bilisummaa ifatti dhawwaaquudhaan ABOn Oromoo, Oromoonis ABO tahuu fi duubbeen ABO Ummata Oromoo tahuu ifatti mul’isan.
Yeroo Sana irraa eegalee Sabni Oromoo biyya keessaa fi alattis Warraaqsa Bilisummaa Oromoo kan maqaa Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) jedhuun dhowe sana daran jabeeffatee itti fufsiisuuf akka tahutti Sadaasa 09 Guyyaa Yaadannoo FDG taasifatee waggaa waggaadhaan yaadatee ayyaaneffachuu fi waadaa Warraaqisichaa itti haaromfachuu eegale.
Adeemsa hojii qabsoo Ummatni Oromoo fi Dhaabni isaa ABOn harka wal qabachuudhaan akkasitti gaggeessantu lakkuma buluun moyxannoo kuufachaa fi bilchina isaa dabalaa deemee bara 2011 gara sadarkaa guddaatti tarkaanfatee Jaarmaya Dargaggoota Oromoo kan caasaa fi sagantaa ifaadhaan of labsee ifatti diina dura dhaabbatu maddisiise. Qeerroo Bilisummaa Oromoo !
Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromootu Oromiyaa keessatti hidda jabeeffachaa deemee Sadaasa 12, 2015tti Warraaqsa Bilisummaa Oromoo kan maqaa FDG jedhuun waggoota 10f gaggeeffamaa ture gara boqonnaa haaraa fi sadarkaa ol’aanaa Fincila Xumura Gabrummaa (FXG) jedhutti guddise.
Warraaqsi Bilisummaa Oromoo kan Sadaasa 12, 2015 gara Fincila Xumura Gabrummaatti guddate seenaa Empaayera Itoophiyaa keessattis tahe Afiriikaa keessatti haala takkaa mul’atee hin beekneen osoo addaan hin citne cimee itti fufuudhaan kunoo waggaa tokko guutuuf guyyoota muraasatu hafa.
Sochii qabsoo dheeraa fi seena-qabeessa dhawaataan deemaa jiru kanaan injifannooleen cululuqoon hedduun gama siyaasaa fi diplomaasiitiin gonfatamaniiru. Waa’een Qabsoo Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa matootii oduu Addunyaa keessaa tokko tahuu jalqabeera. Akkanaanis QBO dhageeytii fi mararfannoo daranii horachuun guyya irraa dabalaa dhufee jira.
Egaa gabaabaatti cuunfinee yeroo keenyu sochii FDG kan waggoota 10f wareegama ilmaan Oromoo kumootaan lakkaawamaniin utubamaa, bu’aa-bahii hedduu keessa qaxxaamuraa dhufetu bara dabre Sadaasa 12, 2015 irraa kaasee gara FXGtti of jijjiire. Seenaan boonsaan kun miseensotaa fi deggertoota ABO qofa osoo hin taane akkuma waliigala Saba Oromootti hundi keenya kan ittiin boonuu fi kunuunsinee tikfachuu qabnu Faaya Seenaa Qabsoo Bilisummaa Saba Oromoo ti.
Sochiin seena-qabeessi Sabni Oromoo guutuun (keessattuu dargaggootni Dhaloota Qubee tahan Qeerroo fi Qarreen) lubbuu, dhiigaa fi lafee itti gabbaruun finiinsaa jiran kun kan dafee galii isaa maayyii dhaqqabuu danda’u yoo Sabni Oromoo hundi dammaqiinsaa fi bilichinaan shira diinaa fi farreen alaa fi keessaa, kan fagoo fi dhihoo hunda irraa cimsee tikfachuu danda’e qofa.
Yeroon ammaa yeroo diinni keenya (Mootummaan Wayyaanee) Ummata Oromoo fi Qabsoo Bilisummaa Ummatichaa irratti humna qabu hundaan lola banee jiru waan taheef wanneen tokko tokko kan rakkoo keessa keenyaa fakkaatanii mul’atan kaasnee hanga malu irraa dubbachuun dhibaa tahuu danda’a. Haa tahu malee qabxii tokko kan barruu gabaabaa kana akkan barreessuuf na dirqe dimshaashumatti tuqee akka Ummatichi Abbaa dhimmaa (Sabni Oromoo) dammaqinaan ilaalee eeggannoo feesisu godhu yaadachiisuun dirqii taha. Innis waa’ee kabaja Ayyaana guyyaa FDG kan bara kanaa waan ilaalu dha. Yeroo ammaa namootni ykn. gareeleen ayyaanni FDG kan bara kanaa akka waan waggaa 1ffaa taheetti dhiheessaa jiran jiru. Eenyummaa namoota kanaa oggaa ilaallu ammoo wallaala irraa kan godhaa jiran osoo hin taane tahe jedhanii seenaa FDG kana jallisuudhaaf waan gochaa jiran tahuu hubachuun nama hin dhibu. Kun maaliif taha? Namootnii fi gareeleen akkanaan dhugaan isaan jallisuuf tattaafachaa jiran waa’ee guyyaa Ayyaana FDG kana qofa miti. Walumaagala waa’ee qabsoo fi qabsaawota Oromoo (Sochii Qeerroo fi FDG dabalatee) dhugaa jiru haaluu fi waan hin jirre tolchanii dhiheessuuf tattaafachuun ifatti mul’achaa jira. QBO galma isaa irraa jallisanii dantaa dhuunfaa fi kan humna biroo guutuuf dhiibbaa humni biraa duuba irraa godhuun waan gaggeeffamaa jiru yoo tahe malee dhalli Oromoo dhugumatti dantaa Saba Orooofin hojjedha jedhu dhugaa QBO jallisee ykn. dhoksee fi haalee waan hin jirre wanni odeessuuf hin jiraatu. Ilmaan Oromoo bakka jiranii namoota akkanatti seenaa QBO jallisuuf tattaafatan irratti dammaqee of irraa tiksuu fi qabsoo isaa tikfachuu qaba.
Simboo A. Danuu (Sadaasa 03, 2016)